डान्सबार र दोहोरीसाँझ पूर्ण रुपमा बन्द, राति १० बजेपछि रेष्टुरेन्ट खोल्न नपाइने - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ४ बैशाख २०७८, 8:56 pm
काठमाडौं । शनिबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकले डान्सबार र दोहोरी साँझ पूर्ण रुपमा बन्द गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले डान्सबार र दोहोरी साँझ अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ ।
डान्सबार र दोहोरी साँझ पूर्ण रुपमा बन्देजसँगै रेष्टुरेन्टतर्फ पनि सीसीएमसीले कडा सुरक्षा मापदण्ड तयार पारेको छ । शनिबार सीसीएमसीको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार अब राति १० बजेपछि रेष्टुरेन्ट बन्द गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत २५ गते जारी गरेको अपीलमा राति ९ बजेपछि रेष्टुरेन्टहरु बन्द गर्न अपील गरिएको थियो । यहीँबमोजिम सीसीमएसीले शनिबार निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ ।
बैठकले डान्सबार र दोहोरी साँझ र रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
पर्सामा शनिबार थप ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पर्सामा शनिबार थप ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सरोज रोशन दासले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार ९० जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए । जसमा ३९ जना पर्साका र ६ जना बाराका रहेका छन् ।
संक्रमण पुष्टि हुनेहरुमा २६ जना पुरुष र १९ जना महिला रहेका छन् भने उनीहरुको उमेर समूह ६ देखि ८२ वर्षसम्म रहेको डा. दासले बताए ।
संक्रमितहरुको सिटी भ्यालु १४.६ देखि ३५ रहेको छ । शनिबार थपिएका संक्रमितसँगै पर्सामा ३ हजार ४ सय ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ३ हजार १ सय ९९ जना संक्रमितहरु निको भइसकेका छन् ।
यसैगरि पर्सा जिल्लामा हालसम्म कोरोनाबाट ५८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १६४ जना होम आइसोलेशनमा रहेका छन् ।
१४ जनाको भने नारायणी अस्पतालको आइसोलेशनमा उपचार भइरहेको छ । होम आइसोलेशनमा बस्नेहरुमध्ये १ सय पुरुष र ६४ जना महिला रहेका छन् ।